Sidina vaovao Düsseldorf, Birmingham, Helsinki, Liverpool, Stockholm, London, Paris ary Oslo avy any Milan Bergamo izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Sidina vaovao Düsseldorf, Birmingham, Helsinki, Liverpool, Stockholm, London, Paris ary Oslo avy any Milan Bergamo izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Italia • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Sidina vaovao Düsseldorf, Birmingham, Helsinki, Liverpool, Stockholm, London, Paris ary Oslo avy any Milan Bergamo izao.
Miaraka amin'ny lisitry ny toerana vaovao, ny andro voalohany amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina dia nahita ny Eurowings nampiditra fifandraisana amin'ireo faritra mendri-piderana ao Düsseldorf sy ny fehin-kibo indostrian'ny Ruhr, tamin'ny voalohany dia nandefa serivisy in-efatra isan-kerinandro izay hitombo ho in-enina isan-kerinandro amin'ny Febroary. 2022. Nandritra izany fotoana izany Ryanair dia nanampy toerana dimy vaovao avy any Milan Bergamo – Birmingham, Helsinki, Liverpool, Stockholm Arlanda ary Toulouse.
Ny mpandeha an-habakabaka dia hanana safidy maro kokoa amin'ny lalana sy toerana haleha amin'ny vavahadin'i Lombardy amin'ity ririnina ity.
Ny seranam-piaramanidina Milan Bergamo dia mandray ny totalin'ny mpitatitra an'habakabaka vaovao enina amin'ity taona ity.
Ny fifandraisan'i Milan Bergamo amin'izao tontolo izao dia nihatsara be tamin'ny vanim-potoana ririnina 2021-22.
Milan Bergamo dia manolotra lalana vaovao maro amin'ity vanim-potoana ririnina ity, ary koa ny fandraisana ny fandefasana indray sy ny fitomboan'ny matetika, hahitana safidy bebe kokoa noho ny hatramin'izay avy amin'ny vavahadin'i Lombardy. Manokatra zotra vaovao 12 - ny 10 amin'ireo dia toerana nampidirina voalohany tamin'ny sarintanin'i Milan Bergamo - ny seranam-piaramanidina italiana dia handray zotram-piaramanidina vaovao hafa amin'ny volana ho avy. HiSky miditra amin'ny antso an-tariby.
Raha raisina ho enina ireo mpitatitra vaovao tamin'ity taona ity, Milan Bergamo dia nanamafy ny mpitatitra entana lafo vidy (LCC) Moldova, HiSky dia hanatsara be ny tambajotran'ny seranam-piaramanidina amin'ny faran'ny volana Desambra. Manokatra rohy indroa isan-kerinandro mankany Baia Mare, Targu Mures ary Chisinau, ny LCC dia hanolotra seza efa ho 14,000 mandritra ny W21/22 ho an'ireo foibe manan-tantara sy ara-toekarena ao Romania sy Moldova.
Miaraka amin'ny lisitry ny toerana vaovao, ny andro voalohany amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina dia nahita ny Eurowings nampiditra fifandraisana amin'ireo faritra manan-danja ao Düsseldorf sy ny fehin-kibo indostrian'ny Ruhr, tamin'ny voalohany dia nandefa serivisy in-efatra isan-kerinandro izay hitombo ho in-enina isan-kerinandro amin'ny Febroary. 2022. Nandritra izany fotoana izany Ryanair dia nanampy toerana dimy vaovao avy Milan Bergamo – Birmingham, Helsinki, Liverpool, Stockholm Arlanda ary Toulouse – raha mbola manohy ny Düsseldorf Weeze sy Kharkiv, ilay mpitatitra irlandey izay manompo toerana 107 avy any Lombardy.
Miaraka amin'ny fanampiana an'i London Gatwick (intelo isan-kerinandro miaraka amin'ny easyJet), Paris Orly (intelo isan-kerinandro miaraka amin'i Vueling), ary Oslo (indroa isan-kerinandro miaraka amin'i Flyr nanomboka tamin'ny Janoary 2022), dia nihatsara be ny fifandraisan'i Milan Bergamo amin'izao tontolo izao.
Giacomo Cattaneo, Talen'ny Aviation Commercial Aviation, SACBO, naneho hevitra momba ny filazana momba ny zotram-piaramanidina vaovao sy ny toerana haleha, dia nilaza hoe: “Mitohy ny fanarenana ny fifamoivoizana sy ny fanamboarana ny tambazotrantsika, ary rehefa manohy mivoaka avy amin'ny fahasahiranana tato anatin'ny 18 volana isika, dia tena mirehareha mandray ny zotram-piaramanidina sy zotra vaovao. Ireo fanampim-panazavana amin'ny tambajotra ireo dia mampiseho ny fanoloran-tenanay hanolotra safidy bebe kokoa raha namolavola ny tranonay izahay mba hahazoana antoka fa tsy vonona amin'ny fanarenana tanteraka izahay fa miitatra ihany koa. Vita izao ny seranan-tsambo vaovao misy anay, miaraka amina vavahady fidirana enina, carousels entana ary tolotra fivarotana fanampiny. ” Nanohy i Cattaneo hoe: “Tsy mijanona hatreo ny fampiasam-bolan'ny SACBO. Efa eo am-panatanterahana ny fampandrosoana ny sisin-tany izahay. Efa natomboka ny fanavaozana ny toerana fisavana ary tsy ho ela dia hisy ny fanitarana miaraka amin’ny toerana fiarovana vaovao. Na eo aza ny fifandraisan'ny fiaran-dalamby, ny apron avaratra lehibe kokoa ary ny lalamby avaratra vaovao ao anaty fantsona, ny fampiasam-bolan'i Milan Bergamo amin'ny ho avy dia mazava ho an'ny mpandeha sy ny mpiara-miombon'antoka.